Homocysteine ​​rehefa manomana vohoka - ny fitsipika, inona no ao amin'ny vehivavy?
Ny fe-potoana fiomanana amin'ny fitondrana vohoka ho an'ny reny hoavy dia mifandray amin'ny fianarana maro. Anisan'izy ireo, ary fanadihadiana momba ny fikambanana toy ny homocysteine. Eritrereto ity fanafody ity amin'ny antsipiriany bebe kokoa, ho hitantsika: maninona no homena ny homocysteine ​​amin'ny famolavolana ny fitondrana vohoka, inona ireo famantarana ny fitsipika ary inona no mitondra mankany amin'ny fitomboany sy ny fihenany.
Homocysteine ​​- ahoana ny amin'ny vehivavy?
Rehefa mandefa vehivavy ho an'ny fanadihadiana, izay mamaritra ny haavon'ny homocysteine ​​ao amin'ny ra, karazana fikarohana inona ny ankamaroan'ny reny tsy mahalala. Ity vokatra ity dia vokatry ny fanodinana methionine (asid amino). Mihamitombo tsikelikely ny halavan'ny homocysteine ​​ao amin'ny ra, na izany aza, rehefa mitranga ny bevohoka, dia mihena ny fihenany (1st and 3rd trimesters).
Ny homocysteine ​​amin'ny fandrindrana vohoka dia manan-danja mba hanamarinana noho ny fiantraikany ratsy eo amin'ny fizotry ny fitondrana. Mandritra io vanim-potoana io, io fiasa io dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fivoaran'ny tosi-drà, izay miankina amin'ny fampandrosoana ny foetus sy ny faharetany. Ny dokotera dia mihevitra fa ilaina ny fametrahana ny fihenan'ny homocysteine ​​eo amin'ny dingan'ny fiomanana amin'ny fitondrana vohoka mba ahafahana mamaly amin'ny fotoana hampihenany na hampitombo azy, ary handray fepetra.
Inona no asehon'ny homocysteine?
Ny fianarana hoe inona no homocysteine, ny mety ho an'ny moms eo amin'ny sehatry ny fiomanana amin'ny fitondrana vohoka dia mangataka ny dokotera fanontaniana iray - inona no fandalinana natao ary inona no asehony. Mifototra amin'ny vokatra azo, ireo mpitsabo dia manatsoaka hevitra mikasika ny fizotry ny fizotry ny intracellular amin'ny vatan'ny vehivavy iray. Noho izany, raha mihen-danja ny metabolismin'ny homocysteine, dia manangona ao amin'ny habakabaka izy io, ary avy eo amin'ny plasma blood. Ao amin'ny fifantohana avo dia manana fiantraikany amin'ny cytotoxika ilay fitambarana.
Noho ny dingana toy izany, dia mety ho fandikana ny fahamendrehan'ny rindrin'ireo sambo - mihen-danja ny tontolony. Any amin'ny toerana simba, misy kalcioma sy kolesterol mipetraka eo ambonin'ny sambo. Noho ny fiovana toy izany dia miteraka ny fananganana toeram- ponenana atherosclerotic . Izany dia mampitombo ny mety hampidi-doza ny ra ao amin'ny fantson-dra, izay mahatsapa ny fivoaran'ny trombôs mandritra ny fitondrana vohoka.
Nahoana no misy homocysteine ​​rehefa manomana vohoka?
Ny habetsaky ny homocysteine ​​ao amin'ny ra dia ahafahan'ny dokotera manatsoaka hevitra mikasika ny fizotry ny fizotry ny intracellular. Ny fanitsakitsahana ny fivoaran'ny metabolismy dia mampitombo ny mety ho voka-dratsin'ny ra ao amin'ny fantson-dra. Io fiovana io dia mahavaha ny fanakanana ny lalan-kely izay ao amin'ny placenta. Vokatr'izany, misy ny fanitsakitsahana ny fivoaran'ny zaza ao anaty zaza mandritra ny fitondrana vohoka. Mba hisorohana izany, ny dokotera dia miezaka mamantatra ny fitsaboana sy ny fanombanana azy eo amin'ny sehatry ny fandrindrana.
Famakafakana homozystine ho an'ny fanomanana vohoka
Mba hamaritana ny haavon'ny homocysteine ​​amin'ny fandrindrana ny fitondrana vohoka, ny dokotera dia miresaka ny vehivavy amin'ny fanadihadiana. Amin'ity tranga ity, ny dokotera dia manoro ny fanadihadiana mandritra ny 3 volana mialohan'ny fanombohana ny fanomanana. Raha efa nanana olana tamin'ny fikorontanan'ny metabolika tao amin'ny vatan'ny homocysteine ​​ny renim-piankohony amin'ny ho avy, dia natao ny seminera efa ho enim-bolana talohan'ny daty voatondro.
Homocysteine ​​- fanomanana
Mba hijerena ny homocysteine ​​mandritra ny fanomanana vohoka, dia ilaina ny mitandrina maromaro amin'ny fitsipika fanomanana. Mba hanaovana izany:
Indray andro alohan'ny fotoana fametrahana ra, dia ilaina ny manaisotra ny sakafo matavy sy ny alikaola amin'ny sakafo.
Ny andro alohan'ny fianarana, dia voarara tanteraka ny hetsika ara-batana mafy.
8-14 ora alohan'ny hakana santionan-dra iray voarara ny sakafo dia azo atao ny misotro (tsotra, rano) ihany.
Aza mifoka 30 minitra alohan'ny fitsapana.
Homocysteine ​​- ahoana no atao?
Alohan'ny handraisana ny homocysteine ​​rehefa manomana vohoka, vehivavy iray no mahazo famerenana amin'ny dokotera. Ny fianarana dia atao amin'ny maraina amin'ny vavony iray tsy misy. Ny fanadihadiana dia natao amin'ny alalan'ny fakana santionan-drà avy amin'ny vina ulnar. Ho famaritana ny homocysteine ​​amin'ny fandrindrana ny fitondrana vohoka voalohany, dia raisina ny 2-5 ml ny ra, izay napetraka ao anaty tavoahangy mangatsiaka, voatanisa ary nalefa tany amin'ny laboratoara. Ny vokatra azo dia azo atao mandritra ny 2-3 andro, arakaraka ny fiasan'ny mpitsabo.
Homocysteine ​​- ny fitsipika amin'ny vehivavy rehefa manomana vohoka
Ny tahan'ny homocysteine ​​rehefa manomana vohoka dia 10-11 μmol / l. Io fifantohana io dia raisina ho fitsipika ara-batana. Ny fanilihana dia manondro fandikan-dalàna, ary mitaky ny fampiharana ny fepetra fanitsiana. Ny algorithm ho an'ny fampiharana azy dia mivoatra tsirairay, manamarina ny toe-batana ankapobeny amin'ny vatan'ny vehivavy, ny fisian'ny aretina mitaiza ary ny fizotry ny aretina. Ny fanarahan-dray amin'ireo torohevitra ara-pahasalamana sy prescriptions dia manampy amin'ny fanafoanana haingana ny fandikana, ny homocysteine ​​marina, ny fitsipika izay voalaza etsy ambony.
Homocysteine ​​ambony amin'ny fandrindrana fitondrana vohoka
Matetika ny fihanaky ny homocysteine ​​no mahatonga ny fihenan-jaza amin'ny fitondrana vohoka. Noho izany, tokony atao ny fanitsiana eo amin'ny sehatry ny fandrindrana. Alohan'ny hijanonan'ny homocysteine, ny dokotera dia mitarika fanadihadiana manasongadina ny fametrahana ny anton'ny fampitomboana. Ny fomba fampihenana ny homocysteine ​​dia novolavolaina raha jerena ny antony mahatonga izany:
Ny fihenan'ny vitamin B. Amin'io tranga io, ny dokotera dia manolotra sakafo misy dikany avo lenta amin'ny thiamine, pyridoxine, asidra folika.
Ny vokatry ny nikotine. Hita fa miteraka fihanaky ny homocysteine ​​ny fifohana sigara. Mba hampihenana azy dia mila mamoy nikôtinina ianao .
Kafeinina. Rehefa misotro kafe ianao dia mitombo ny fihenan'ny homocysteine. Mba hampihenana izany dia mila manaisotra ny fisotroana ianao.
Hetsika ambany ambany. Ny fanaovana fanatanjahan-tena dia manampy amin'ny fihenan'ny homocysteine.
Novonoina ny homocysteine ​​rehefa manomana vohoka
Ny fahatakarana ny fihenan'ny homocysteine ​​amin'ny fandrindrana ny maha-bevohoka dia tsy maintsy lazaina fa matetika no misy ny toe-javatra mifanohitra - ny tsy fahampiana azy. Raha kely dia kely ny homocysteine, dia tsy mety hisy fiantraikany eo amin'ny fizotran'ny zaza izany. Ny ahiahy dia mendrika ny manaparitaka rehefa misy homocysteine ​​ambany ambany - 4.1 μmol / l ary ambany. Ao anatin'izany toe-javatra izany, ny dokotera dia manolotra fitsaboana manokana mba hampitombo ny haavony. Ny reny manan-danja ihany koa dia afaka mandray fepetra hanamarinana ny haavon'ny homocysteine:
Mba hampihenana ny hetsika ara-batana mafy - hanaisotra fanofanana amin'ny fanatanjahan-tena mandritra ny andro maromaro.
Misotro kafe amin'ny maraina.
Ahoana ny fiterahana miaraka amin'ny kambana?
Lian-dronono ny valanaretina - vokany
Amin'ny inona ny manao akanjo hoditra-pensilihazo?
Fetin'ny bera - fananana medikaly
Hugh Jackman niray hevitra tamin'ny kintana tamin'ny "Wolverine 3"
Rapper 50 Cent no voasazy ho an'ny vady any Karaiba
Outerwear for fall 2014
Miakanjo mitandahatra miaraka amin'ny ketsa
Flebodia amin'ny fahaterena
Cutlets avy amin'ny squid
Hollywood dia tsy hitovy velively amin'ny "raharaha Harvey Weinstein"
Vase fametrahana amin'ny tanany manokana
Ahoana no fomba fitondran'ny mozika ao amin'ny nenin-doha amin'ny zaza?
Kitapo mofomamy - fanadinana
Inona no zava-pisotro misy alkaola rehefa mihena ianao?